WASAARADDA WAXBARASHADA IYO SAYNISKU WAXAY JIDAYSAY SUNNE WANAAGSAN. WQ: Khalid Idan Yousuf
Wednesday 3rd October 2018 12:02:51 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Sidii caadada innoo ahayd waxa aynu u baranay in boqolaal qof inta la isku yeedho la yidhaa imtixaan baad
galaysaan, ha dhawna si lagu xushay la garan waayo taasi oo u horseedi jirtay ardaygii dedaalay niyad jab iyo u qaadan waa. Maanta se waxa lagu kala saaray ardayga siday u kala sarreeyeen natiijo ahaan. Waxaad mooddaa in wasaaradda waxbarashu bilawday nidaam wax ka bedeli doonaa guud ahaan qorshaha xulashada fursadaha sida shaqaalaysiinta, dalacsiinta, waxbarashada iyo waliba fursadaha kale ee dawladda ka bannaanaada.
Waa markii ugu horreysay ee nidaaam noocan oo kale ah lagu kala saaro codsadayaasha fursado waxbarasho oo ay innoogu deeqday dawladda Ethiopia. Waa talaabo hore loo qaaday oo dhiiri gelinaysa ardayda u heellan waxbarashada. Wasaaraddu waxay bilawday nidaam haddii lagu dhaqmo horseedi doona in tayada waxbarashada iyo dedaalka ardaydu is bedesho.
Fikir ahaan waan waan soo dhawaynayaa, waxaanan u arkaa nidaam xalaal ah oo cid walba ku qanci karto. Waxaan ugu baaqayaa Wasaaradaha iyo Hay'adaha kale ee dawladda in nidaamka la raaco, oo uu noqdo mid hirgala.
[Daawo] Wasaarada Waxbarashada Oo Kulan Dar-Dar Gelin Ah U Qabatay Ilaalada Imitixaanka Somaliland
[Deg Deg:-] Dagaal Dhex-Maray Ciidanka Somaliland Iyo Ciidamo Khaatumo Ka Socda
Boqor Buur-Madow Oo Ka Jawaabay Eedayntii Badhasaabka Sanaag [Ma Ciidan Buu Samaystay]
Saanad Ciidan Oo Laga Xaday Xarunta Wasaarada Gaashaandhigga, Xiisad Ka Taagan & Xaaladihii Ugu Dambeeyay.
[Daawo:-] Wasiirka Arrimaha Gudaha Iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Oo Kormeer Ku Tegay Suuqa Hargaysa
Ciidanka Booliska Somaliland Oo Qaylo Dhaan Xoogan Ka Muujiyay Internetka Iyo Arrimo Ay Soo Bandhigeen
[War Hadda Ah] Xukuumada Somaliland Oo Ka Hadashay Ciidankii Goostay